Semalt पातलो सामग्री के हो वर्णन गर्दछ
पातलो सामग्री र कीवर्डहरू
पातलो र खराब-गुणवत्ता सामग्री को प्रभाव
पातलो सामग्रीबाट कसरी बच्ने
सामग्री राजा हो, तर निश्चित रूपमा, सबै प्रकारका सामग्रीलाई राजा मान्न सकिदैन। किंगली सामग्रीले उच्च स्तरको मूल सामग्रीलाई बुझाउँदछ गुगलमा र्याकमा राम्रोसँग अनुकूलित। पातलो सामग्री लगभग यसको सीधा विपरीत जस्तै हो। पातलो सामग्रीले वेब सामग्रीको प्रकारलाई बुझाउँदछ जुन गुगलमा र्याक हुँदैन। किन? यो अर्थपूर्ण, मूल, वा प्रासंगिक छैन र न त यसले उपयुक्त कुञ्जी शव्दहरू समावेश गर्दछ।
गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूले पातलो सामग्री (कम गुणवत्ता) सामग्रीलाई धेरै मन पराउँदैनन् किनकि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू (वेबसाइट आगन्तुकहरू) त्यस्ता सामग्रीलाई घृणा गर्छन्। एक आदर्श विश्वमा, वेब पृष्ठहरूले उच्च-स्तरको सामग्री मात्र समावेश गर्दछ जुन राम्रोसँग लेखिएको छ, खोजी इन्जिन मैत्री, र पढ्न सजिलो छ। यो जहाँ अधिकांश वेबसाइटहरू असफल हुन्छन्। पातलो सामग्री, तपाईंले किन यसलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ, र कसरी त्यसो गर्ने भनेर तपाईंलाई जान्न यहाँ सबै कुरा छ।
जब वेबसाइटसँग केवल केहि प्रासंगिक कुञ्जी शब्द र कुञ्जी वाक्यांशहरू हुन्छन्, वेबसाइट पातलो सामग्री हुन सक्छ। यो पातलो सामग्री हो किनकि गुगलको एल्गोरिदमले आवश्यक कुञ्जी शब्दहरू लिन सक्दैन जुन ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले त्यो वेबपृष्ठबाट खोजी गरिरहेका थिए। मुख्य वाक्यांशहरू शब्दहरू हुन् जुन तपाईंको दर्शकहरूले उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि खोजीको लागि प्रयोग गर्दछन्। वेबपृष्ठले कुञ्जी वाक्यांशहरू समावेश गर्न सक्छ जस्तै: "मेरो कार," "मेरो अफिस," "मेरो कम्प्युटर," र "मेरो ठेगाना।"
त्यसोभए यसमा ठूलो कुरा के हो? खोजी ईन्जिनहरूले यी कुञ्जी शव्दहरूलाई खोज कुञ्जी शव्दमा साइटको प्रासंगिकताको सूचकको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अधिक खोजी ईन्जिन-अनुकूलित कुञ्जी शब्दहरू, अधिक संभावना व्यक्तिहरूले तपाईंको साइट फेला पार्नेछन्। यदि तपाईंको साइटमा कम सान्दर्भिक कुञ्जी शब्दहरू छन् भने कम व्यक्तिहरूले तपाईंको साइट फेला पार्नेछन्।
यसले तपाईंको SERPs (खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ) र ट्राफिकको गुणस्तरलाई असर गर्दछ जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वेबपृष्ठहरू जुन प्रासंगिक कुञ्जी शव्दहरू धेरै कम हुन्छन् केवल खोज इञ्जिनहरूमा कम रैंकिंग प्राप्त हुन्छ। किन? यसको मतलव तपाईको वेबसाइट विशेष खोजी क्वेरीसँग प्रासंगिक छैन। यो तपाईंको व्यवसायको लागि ठूलो समस्या हुनेछ, विशेष गरी यदि तपाईंको एक संतृप्त कोठा हो।
अधिक कुञ्जी शव्दहरू पातलो सामग्री मान्न सकिन्छ, र यसले तपाईंको वेबसाइटलाई दु: ख दिन सक्छ। गुगलले कहिलेकाँही साइटहरूलाई धेरै धेरै कुञ्जी शब्दहरूको लागि सजाय दिन्छ, खास गरी यदि तिनीहरू अप्रासंगिक कीवर्डहरू हुन् भने।
खोज ईन्जिनसँग पृष्ठको प्रासंगिकताको न्याय गर्न एक तरीका छ कीवर्डहरूको प्रयोगको पर्वाह नगरी, तपाई वास्तवमा धेरै कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर आफैलाई चोट पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ। यो किनभने गुगलको एल्गोरिथ्म तपाईको सामग्रीसँग अधिक प्रासंगिक कुञ्जी शव्दहरू थाहा नहुन सक्छ। त्यसो भए तपाईले कुनै पनी किवर्डको लागि श्रेणीकरण समाप्त गर्नुभयो। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको कुञ्जी शव्दहरू सान्दर्भिक छन् र कम अनुपातमा प्रयोग गरिएको छ।
१. कमजोर ट्र्याक्सन
खराब-गुणवत्ता सामग्री सहितको वेबपृष्ठहरूले पर्याप्त ट्र्याक्शन प्राप्त गर्दैनन्। यो किनभने मानी बिना अर्को वेब सामग्री पढ्नु भन्दा जानकारीमूलक, सान्दर्भिक, र ताजा संसाधनहरूको लागि वेब सर्फिंग गर्न अधिक रुचि छ।
यस अवस्थामा, गुणस्तरीय सामग्री बिना नै, तपाइँको वेब पृष्ठलाई 'गहिरा वेब' वा सर्च ईन्जिनहरूले 'स्पाइडर वेब' मा फ्याँकिनेछ। र तपाइँको आला मार्केटमा तपाइँको प्रतिष्ठा र अधिकार निर्माण गर्ने कुनै सम्भावना छैन। पातलो सामग्री एक ठूलो समस्या हो, विशेष गरी जब तपाईंको वेबसाइट तपाईंको व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण गेटवे हो।
२. गरीब गुगल स्तर निर्धारण
गुगलले सधैं आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई गुणस्तर, जानकारीमूलक र सान्दर्भिक सामग्री मार्फत उच्च मूल्य प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्दछ। तथ्य यो हो कि Google मा सूचना खोजी गर्न जान्छन् केवल संसाधनहरू चाहिन्छ कि तिनीहरूलाई सही रूपमा सूचित गर्दछ, तिनीहरूका प्रश्नहरूको सान्दर्भिक उत्तरहरू प्रस्ताव गर्दछ वा तिनीहरूलाई उपयुक्त स्रोतहरूमा निर्देशित गर्दछ। ठिक छ, पातलो सामग्रीले यी सबै प्रस्ताव गर्न सक्दैन, र Google त्यस बारे सचेत छ। त्यसो भए, यसले पातलो सामग्री प्रदान गर्ने वेबसाइटहरूलाई डे-र्याक गर्दछ।
पातलो सामग्री भएको वेबसाईटहरूले दृश्यता र कम स्तर कम गरेको छ, व्यक्तिले देख्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई क्लिक गर्न दिनुहोस्। यसैकारण तपाईको वेबसाइटमा सँधै गुणस्तरीय सामग्री राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाई गुगलको दाहिने पट्टि रहनुहुन्छ।
Oor. गरीब ब्राण्ड प्रस्तुतीकरण
पातलो सामग्रीले तपाईंको ब्रान्ड/वेबसाइटलाई चोट पुर्‍याउँछ। एक पटक व्यक्तिले तपाईंको वेबसाईटलाई अप्रासंगिक सामग्रीसँग सम्बद्ध गरे, तपाईं तिनीहरूको राम्रा ग्रेसहरूमा पाउनुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिले तपाइँको पृष्ठलाई सक्रिय रूपमा बेवास्ता गर्दछ र सम्भवतः अरूलाई तपाइँको वेबसाइटको भ्रमण गर्नबाट रोक्दछ। किन? उनीहरूलाई थाहा छ कि कुनै मूल्य प्रस्ताव गरिने छैन। अवश्य पनि यसले तपाईंको राजस्वलाई पनि असर गर्छ। किन? यदि मानिसहरूलाई तपाइँको ब्रान्ड मनपर्दैन र यति तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्न भने, तपाइँ सम्भावित बिक्री गुमाउनुहुन्छ।
गुगलले उत्तम नतीजाहरू प्रदान गर्न कोशिस गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताको खोजी आशयसँग मेल खान्छ र प्रयोगकर्तालाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ। यदि तपाई गुगलमा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले खोज इञ्जिनमा प्रमाणित गर्नु पर्छ कि तपाईले प्रासंगिक र जानकारीमूलक संसाधन (हरू) प्रदान गरिरहनु भएको छ जुन प्रयोगकर्तालाई चाहिन्छ।
जानकारीमूलक तर रमाईलो सामग्री लेख्नुहोस् (खोजी ईन्जिन अनुकूलित हुनुपर्दछ), र तपाईं Google लाई तपाईंको हातको हत्केलाबाट खाँदै हुनुहुन्छ। यो सम्भव छैन यदि तपाईको पोष्ट गरिएको सामग्री विस्तृत, ताजा र प्रासंगिक छैन विशेष गरी इन्टरनेट ब्राउजरको उद्देश्यमा। पातलो सामग्री गुगलले उत्तम खोज परिणामहरूको रूपमा प्रयोगकर्तालाई प्रदर्शन गर्न सक्नेको विपरित हो। यहाँ गुगलले के चाहान्छ (जुन जानकारी पनि हो जसले तपाईंलाई पातलो सामग्रीबाट बच्न मद्दत गर्दछ)।
१. उच्च-गुणवत्ता सामग्रीमा रहनुहोस्
पातलो सामग्री मुद्दाको लड्ने एक तरिका भनेको प्रयोगकर्ताहरूलाई गुणस्तरको सामग्रीको राम्रो मात्रा प्रदान गर्नु हो। उच्च-गुणवत्ता ड्राइव तपाईंको वेबपेजको गुणवत्ता स्कोर। व्यक्तिहरूले सामान्यतया वेबसाइटहरूलाई खोज्दछन् जसले तिनीहरूलाई उच्च-गुणवत्ताको सामग्री प्रदान गर्दछ, त्यसैले यसले गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्न सही अर्थ राख्दछ कि प्रयोगकर्तालाई तपाइँको साइट पहिले भ्रमण गर्न चाहने बनाउँदछ। यसको मतलव उत्तम कार्य भनेको गुणस्तरीय सामग्री प्रदान गर्नु हो, जुनसुकै प्रकारको र्या performance्कन प्रदर्शन तपाईं प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो वेब आगन्तुकहरूलाई राम्रो जानकारी दिनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंको ब्लगमा सामग्री विषयको लागि प्रासंगिक छ र तपाईं यसलाई पूर्ण र स्पष्ट रूपमा वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। खोज ईन्जिनहरू सँधै ताजा सामग्रीको लागि खोज्दछन्, र यदि तपाईं तिनीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंलाई यसको लागि माया गर्नेछन्।
२. तपाईंको सामग्रीलाई उच्च प्राधिकरण साइटहरूमा लिंक गर्नुहोस्
सम्भव भएसम्म, तपाईले आफ्नो सामग्रीमा उच्च गुणस्तरको सामग्री लिंक गर्न प्रयास गर्नु पर्छ जुन तपाईले पोस्ट गर्नुभएको सामग्रीमा। यो केवल आउटबाउन्ड लिंक हुनुपर्दैन; तपाईंले नयाँ वेबसाइटमा आफ्नो वेबसाइटमा सान्दर्भिक पोष्टहरू पनि लिंक गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम, तपाईंको पोष्टहरू तपाईंको नयाँ सामग्रीमा सम्बन्धित अन्य पोष्टहरू लिंक गर्नाले तपाईंको सामग्रीमा थप विश्वसनीयता दिन्छ। यसले तपाईंको पोष्टसँग सम्बन्धित थप जानकारी पहुँच गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई थप अवसरहरू प्रदान गर्दछ। दोस्रो, उच्च अधिकार लिंकहरूको उपस्थितिले गुगल एल्गोरिदमलाई तपाईंको वेबपृष्ठहरू उच्च स्तरमा मद्दत गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यदि तपाईं आफ्नो साइटमा अन्य पोस्टहरू तपाईंको नयाँ सामग्रीमा लिंक गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको पुरानो सामग्रीले ट्राफिक पनि प्राप्त गर्न जारी राख्छ।
O. तपाईंको सामग्री आवश्यकताहरू आउटसोर्स गर्नुहोस्
जे होस् उच्च-स्तरीय सामग्री सँधै सराहना गरिन्छ, राम्रो लेखिएका राम्रो लेखहरू पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यसको लागि मुख्य कारण यो हो कि लेखन गुणस्तरको सामग्रीले समय लिन सक्दछ, र प्रायः व्यक्तिसँग घण्टा मा लक्जरी छैन घण्टा बस्न र लेख्न।
यदि तपाईं यस मुद्दाको वरिपरि जान चाहनुहुन्छ भने, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं लेख लेख्ने कार्यलाई आउटसोर्स गर्नुहोस् जोसँग बढी समय छ। राम्रो सामग्री सस्तोमा आउँदैन, विशेष गरी यदि लेखक सक्षम र अनुभवी छ, तर यो लायक छ।
थप रूपमा, यदि तपाईं खोजी ईन्जिन-अनुकूलित सामग्री लेख्नमा धेरै निपुण हुनुहुन्न भने, तपाईं अन्वेषण गरी सक्नुहुनेछ तपाईंको खोज रैंकिंगमा। तर जब तपाईं काम आउटसोर्स गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि तपाईंको सामग्री दर्शक-रोचक हुनेछ जबकि खोजी ईन्जिन-अनुकूलित भईरहेको छ। यो वास्तवमा किन तपाईले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईले ब्यक्तिहरुलाई जो तपाईको क्षेत्र मा विशेषज्ञ हुन को लागी राख्नु पर्छ। मा सामग्री टीम Semalt पक्कै यस संग तपाईं लाई मद्दत गर्न सक्छ।
D. नक्कल सामग्रीबाट टाढा रहनुहोस्
तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि अधिकांश खोज इञ्जिनहरू 'नक्कल सामग्री' प्रयोग गर्न मन पराउँदैनन्। यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, धेरै वेबपृष्ठहरू एक अर्काको मिररहरू जस्ता छन्। यो किनभने पृष्ठमा रहेको सामग्रीले अर्को पृष्ठको प्रतिलिपि बनाउँदछ। अवश्य पनि, यसले पृष्ठहरूको क्रमबद्ध गर्ने तरिकाको साथ समस्याहरू निम्त्याउँछ। यदि समान जानकारी विभिन्न पृष्ठहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ भने, खोज इन्जिनहरूले यसलाई 'नक्कल सामग्री' को रूपमा हेर्छन् र यी साइटहरूलाई उच्च स्तरबाट रोक्दछ।
वास्तवमा, गुगलले सामग्रीहरूलाई नक्कल गर्ने वेबसाइटहरूलाई दण्ड दिन्छ। त्यसोभए, तपाइँले आफ्नो साइटमा पोस्ट गर्नु अघि यो चोरी चोरी हो भन्ने कुरा निश्चित गर्न तपाइँको सामग्री चोरी चोरीको माध्यमबाट चलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ। Semalt ले दुई उपकरणहरू पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो सामग्री र पृष्ठको मौलिकता जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू वेबसाइट विशिष्टता परीक्षक र पृष्ठ विशिष्टता जाँचकर्ता हुन्।
Your. तपाइँको कुञ्जीशब्दको प्रासंगिकतामा फोकस गर्नुहोस्
जब तपाईं आफ्नो सामग्रीको लागि कुञ्जी शब्दहरू छान्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तिनीहरूलाई सावधानीपूर्वक छनौट गर्नुभयो। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंको सामग्रीले उपयुक्त खण्डहरूमा प्रासंगिक कीवर्डहरू समावेश गर्दछ। धेरै कुञ्जी शब्द अनुसन्धान उपकरणहरूले तपाइँलाई प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रकारमा निर्भर गर्दै विगत र वर्तमान डेटा र सम्भवतः तपाइँको मार्केटि campaigns अभियानहरूबाट डेटामा आधारित कुन ट्राफिकले ल्याउनेछ तपाईलाई बताउँदछ। साथै, तपाइँ तपाइँको कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा लेख्नको लागि सक्षम हुनुपर्दछ जुन तपाइँको वेबपृष्ठ सामग्रीमा प्रासंगिकता देखाउँदछ।
अर्को पटक जब तपाईं आफैलाई सोध्नुहुन्छ, "Google ले कस्तो प्रकारको सामग्री मनपर्दछ वा म कसरी पातलो सामग्रीबाट टाढा रहन सक्छु" माथिका सबैलाई विचार गर्नुहोस् र खोजी ईन्जिन-अनुकूलित उच्च-गुणवत्ता सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्! अधिक वेबसाईटमा तपाईको वेबसाइटमा सामग्री उपलब्ध छ, तपाईको वेबसाइटको प्रदर्शन राम्रो हुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस्; यो जस्तो कठिन देखिदैन। एकचोटि तपाईंले सुरू गरेपछि, तपाईं पातलो सामग्री बेवास्ता गर्न एकदमै सजिलो भएको पाउनुहुनेछ। र निस्सन्देह, लामो भन्दा पहिले, तपाइँको वेबसाइट को प्रदर्शन आफ्नो कल्पनाहरु भन्दा बढी हुनेछ।